Prambanan, Prambanan मंदिर कम्पाउंड - जावा
ठेगाना: बोकोहोजो, प्रम्बनन, स्लेमन रेगेसी, याग्याकार्ता, इन्डोनेशिया
फोन: +62 274 496 401
निर्माण वर्ष: 856
ऊँचाई: 47 मि
कार्य घन्टा: दैनिक, 6:00 देखि 18:00 सम्म
मध्ययुगीन वास्तुकला र संस्कृतिको स्मारक, प्रम्बनको हिन्दु मन्दिर इन्डोनेशियामा सबैभन्दा प्रसिद्ध स्थल हो । धार्मिक इमारतों को यो परिसर, जुन शोधकर्ताओं को तारीख या IX को अन्त, या 10 औं शताब्दी को शुरुआत, देश मा सबै भन्दा ठूलो छ। जावा द्वीपमा प्रिम्बान छ। 1 99 1 मा, Prambanan मंदिर परिसर यूनिसेस्को विश्व विरासत स्थल को स्थिति प्राप्त गर्यो।
परिसरको निर्माण: इतिहास र किंवदंती
कथाकार भन्छन् कि, मन्दिर प्रिन्स बांडुंग बोन्डोभोओसद्वारा 1 दिनको लागि बनाइयो: यो मन्दिर उनको "पूर्व-विवाह मिशन" दुलही, राजकुमारी जङ्ग्रंगद्वारा दिएका थिए। केटी राजकुमारसँग विवाह गर्न थालिन्, जसलाई उनले आफ्नो बुबाको हत्यारालाई सोधे, त्यसैले उनी उनको सामुन्ने असंभव काम गरे।
तथापि, एक रात मा पछि राजकुमार, न केवल एक मन्दिर निर्माण गर्न को लागि, तर एक हजार मूर्तिहरु संग यो सजाने को लागि, लगभग आफ्नो कार्य संग प्रतिलिपि। तर केटी, जसले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सकेन, आफ्ना प्रजाहरूलाई प्रकाश आगोलाई निर्देशन दिए, जसको प्रकाश सूर्योदयको नकल थियो।
धोखाधारी राजकुमार, जसले "झूटो भित्ता" भन्दा पहिला सजावट गर्न 1000 वटा प्रतिमाहरू सिर्जना गर्न सफल भए, उनको हजुरआमा प्रेमीलाई शाप दिईयो, र तिनी, पीडामा परे, त्यो हजारौं मूर्ति धेरै हराएको छ। यो प्रतिमा आज देख्न सकिन्छ - यो शिव को मन्दिर को उत्तरी भाग मा छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण (र पर्यटकहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय) जटिलको अंश उनको नाम - लारा जोंग्रांग हो, जुन "पतला केटी" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ।
Prambanan दुई सय भन्दा बढी मन्दिरहरू छन्। तिनीहरूमध्ये धेरै ज्वालामुखी विनाश र भूकम्पको परिणामस्वरूप नष्ट भएको छ। यी मध्ये केहि मन्दिरहरू ठूलो पैमानेमा बहालीका कामहरूमा पुनर्स्थापित भए, जुन 1918 देखि 1953 सम्मको अवधिमा डच वैज्ञानिकहरू द्वारा गरियो।
परिसरको मुख्य भाग लारा जङ्गंग्रा, माथिल्लो प्लेटफर्ममा प्रम्बानको धेरै केन्द्रमा तीन मन्दिरहरू छन्। तिनीहरू हिन्दू "ट्रिमुर" को लागि समर्पित छन् - शिव, ब्रह्मा (ब्रह्मा) र विष्णु। तीन अन्य साना चर्चहरूले ट्रिनिटीका देवताहरूको देवता (तर देवता पनि हुन्) को लागि समर्पित छन्: एङ्ग्स (ब्रह्मा को वहाण), नन्दी बैल जसमा शिव चलेको र गौडा - विष्णु को सवारी ईगल। सबै मन्दिरहरूको पर्खालहरू पुरातन भारतीय महाकाव्य "रामायण" बाट दृश्यहरू चित्रण गर्न राहतका साथ सजाइएका छन्।
यी छवटा मंदिरहरू एक दर्जन घनिष्ठ ठाउँहरूमा अन्य देवताहरूलाई समर्पित छन्। यसको अतिरिक्त, जटिल घरहरु को बौद्ध मंदिरहरु। दिलचस्प छ, यसको वास्तुकला लारा जोंग्रांग को मन्दिर निर्माण को लागी धेरै समान छ, यद्यपि उनि पुरा तरिकाले अलग-अलग धर्महरु र तदनुसार, संस्कृति हो।
लारा जोंग्रांग र सेवका मन्दिरहरू बीच लुम्बन, असु र बरुचका मन्दिरहरूको खण्डहरू छन्। तर बौद्ध मन्दिरहरू - चंडी सारी, कलसान र प्लसन राम्रो भएको छ। जटिल र अब पुरातात्विक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ। शोधकर्ताहरूले विश्वास गर्छन् कि प्राम्बन क्षेत्रको लगभग 240 मन्दिरहरू थिए।
मन्दिर परिसर कसरी भ्रमण गर्ने?
जोगजाकार्ता बाट प्रम्बान्टनबाट तपाईले जेएल सडकको साथ एक कार लिन सक्नुहुन्छ। युग्य - सोलो (जलन नैसेली 15)। 19किलोमिटरको यात्रामा यात्राको अवधि लगभग 40 मिनेट छ।
तपाईं मन्दिरमा पुग्न सक्नुहुन्छ र सार्वजनिक यातायातबाट: सडक मालिबोरो दैनिक बसहरू बाट ट्राजजेजज कम्पनीको 1 ए मा जानुहोस्। पहिलो उडान 6:00 मा हुन्छ। आन्दोलनको अन्तराल 20 मिनेटमा छ, सडकमा समय 30 मिनेट भन्दा लामो छ। बसहरू धेरै सहज छन्, तिनीहरू एयर कंडीशनिंगसँग सुसज्जित छन्। यात्राको लागि यो राम्रो छ कि बिहान र साँझको समय छान्न नसक्ने, किनकि चोटीको घडीको समयमा तिनीहरू धेरै व्यस्त हुन्छन्, र तपाईलाई उभ्याउनुपर्दछ।
एक अन्य बस मार्ग उगलार्जो बस स्टेशन बाट यज्ञकोर्टाबाट छुट्याइएको छ। तपाईं पनि टैक्सी द्वारा मन्दिरमा जान सक्नुहुन्छ; एक-यात्रा यात्रा 60,000 इन्डोनेशियाई रुपैयाँ (लगभग 4.5 $); यदि तपाईं त्यहाँ र पछिको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, ट्याक्सी चालकले आफ्ना यात्रुहरूलाई नि: शुल्कको लागि लगभग एक घण्टाको लागि पर्खनेछ।
Prambanan 6:00 देखि 18:00 सम्म दैनिक काम गर्दछ; टिकटहरू 17:15 सम्म बक्स अफिसमा बेचेका छन्। "वयस्क" टिकटको लागत 234,000 इन्डोनेशियाई रुपैया (लगभग 18 डलर) छ। टिकटहरूमा चिया, कफी र पानी समावेश छ। 75,000 इन्डोनेशियाई रुपैया ($6भन्दा कम) को लागी, तपाईं एक गाइड भाडा लिन सक्नुहुन्छ।
बिकिनी अदृश्य - फैशन संसारमा नयाँ प्रवृति
कीवमा सेन्ट माइकलको कैथेड्रल
भान्साको लागि सानो सोफा
सिरदर्दबाट ट्याब्लेटहरू - सबै प्रकारका तयारी र उनीहरूको अनुप्रयोगका विशेषताहरू
आफ्नो हातले ड्रिप सिंचाई प्रणाली
वर्णक स्पटको लागि क्यान्सर क्यान्सर
महिलाहरूको लागि तथ्याङ्कका प्रकारहरू - कसरी आंकडाको प्रकारबाट लुगा छनौट गर्ने?
हजुरआमालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ?
एक्सटेन्सन कसरी घरमा हटाउनुहुन्छ?
10 + ताराहरू, जसको अन्तरराष्ट्रिय फोटो ह्याकर्सले वेबमा पोस्ट गरीन्, र उनीहरूको संसारमा उनीहरूलाई अपमान गर्यो!
महिलाहरु मा Gardnerella - आदर्श या रोगविज्ञान?
लिन्डसे लोहानले आफ्नो मंगेतरको आमालाई राशीले निराश गर्यो
एडिले उनको भ्रमण समाप्त गर्यो र विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न तयारी गर्दैछ
एआरटी ग्यालरी, ऊफा
कपडाबाट प्लास्टिकको कपडा कसरी धुने?